Shikhar Post » ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्रीले सुनाए भैंसी ब्याकोदेखि ‘बोक्सी’ आमा र जडिया ‘बा’ को किस्सा
‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा प्रधानमन्त्रीले सुनाए भैंसी ब्याकोदेखि ‘बोक्सी’ आमा र जडिया ‘बा’ को किस्सा
काठमाडौं, १ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फागुन १ गतेलाई बिशेष दिवसको रुपमा मनाउने घोषणा गरेका छन् । बुधवार ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले श्रमको सम्मान गर्ने बातावरण निर्माण गर्न सरकारले यो कार्यक्रम अघि बढाएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो एकवर्षे कार्यकालको ‘सफलता’ सुनाउँदै भनेका छन्– ‘हेर्दाहेर्दै भैंसी ब्यायो ! दूध पनि दियो, पाडी पनि पायो !…. नेपाली जनताले देख्न खोजेको दिन यही हो ।’
आफ्नो सरकारलाई असफल पार्नका लागि दुईवटा प्रयासहरु भइरहेको बताए, एउटा– नेकपामा विभाजन ल्याउने । र, अर्को–अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धलाई बिगार्ने ।
‘हामीसँग बहुमत छ । पर्सि ३ गते सरकारको एक वर्ष पुग्दैछ । धेरै वर्षदेखि अचम्मको कुरा हो यो नेपालका लागि । सरकारको वर्ष दिन पूरा हुँदैछ । तर, अब वर्ष दिन पूरा हुनेमात्रै होइन, बहुमतको सरकार छ, यो सरकार पाँच वर्ष आरामसँग जान्छ । स्थिर सरकार पनि छ । बहुमतसहितको छ ।
यस ऐतिहासिक दिनलाई हामी हरेक वर्ष श्रम दिवस वा रोजगारी दिवसका रुपमा मनाउने छौं । हामीले त्यतिकै घोषणा गरेको हैन, कोही नेपाली भोकै बस्नुपर्दैन । कोही नेपालीले भोकले मर्नुपर्दैन । कोही नेपालीलाई जाडोले कठांग्रिएयर मर्न दिइने छैन । हामीले अभियान सञ्चालन गरेका छौं ।’
अब सुनौं ‘बोक्सी’ को किस्सा । प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्रको अन्तरविरोधबारे जवाफ दिने सिलसिलामा ‘बोक्सी’ उपमा प्रयोग गरेका हुन् । यसलाई प्रधानमन्त्रीकै शब्दमा सुनौं–
त्यसकारण हाम्रा छिमेकीहरुसँग होस् वा अन्तरराष्ट्रिय मित्रहरु, कसैसँग पनि कसैले कुनै प्रकारको असमझदारी बनाउँछु भन्ने प्रयास गर्‍यो भने यो असफल प्रयास हुनेछ । बुद्धि पनि ठीक ठाउँतिर, देश विकासतिर लगाए भो नि, यस्ता नचाहिने नचाहिने कुरातिर किन लगाउनु ? समयमात्र खेर जान्छ ।’